M4V ọkpụkpọ: Olee otú Play M4V Files
> Resource> Video> Olee otú iji Play M4V faịlụ
"Hi niile. M ebudatara ụfọdụ .m4v fim (MPEG-4). Ma apụghị m egwu ha na ọ bụla nke m ẹdude Player, gụnyere Media Player, Real Player, VLC na QuickTime. Onye ọ bụla maara ihe ọkpụkpọ m nwere ike iji egwu ndị a M4V faịlụ? N'ihi na tupu oge eruo. "
Apụghị-akpọ ihe na M4V faịlụ na kọmputa? Echegbula. Isiokwu a na-tumadi iji na idozi a M4V playback nke ma na Windows na Mac. Mbụ, ka anyị mụtakwuo banyere M4V usoro.
Otu M4V faịlụ bụ a nkịtị video format akpa mepụtara Apple. The otu ihe na M4V mara maka bụ Apple si DRM nwebisiinka nchebe. Apple eji DRM M4V na iTunes ụlọ ahịa zere nwebisiinka ịda iwu. Ị nwere ike naanị igwuri egwu, na-echebe M4V faịlụ na ikike na kọmputa na Apple ngwaọrụ. Otú ọ dị, mgbe mgbe a akakabarede, gị M4V faịlụ nwere ike meghere ke a dịgasị iche iche nke media Player e wezụga Apple iTunes, QuickTime Player, VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ wdg
Ebe a, m ga-ewebata a zuru-apụta ngwa iji tọghata iTunes zụrụ M4V na-ahụkarị M4V faịlụ nke mere na ị nwere ike igwu ha na ihe ọ bụla media ọkpụkpọ na ngwaọrụ. Ọ bụ Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Tupu akakabarede, download, wụnye na ẹkedori a ngwa.
1 Tinye M4V faịlụ
Pịa Add Files button mbubata gị zụrụ M4V ma ọ bụ nkịtị M4V faịlụ site na kọmputa a usoro.
Mepee mmepụta Format 's adaala window iji họrọ gị ọkpụkpọ, ngwaọrụ ma ọ bụ na-akwado video formats.
See tọghata bọtịnụ iji malite video akakabarede. Mgbe ahụ, faịlụ ga-converted gị ịga mmepụta usoro. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike playback na M4V faịlụ (gụnyere zụrụ ndị) Otú ọ dị na ị chọrọ.
Cheta na: N'ihi na iTunes zụrụ M4V faịlụ, i nwere ike na tọghata ha na Windows ma ọ bụghị na Mac.
Otu M4V format bụ ihe Apple usoro. Na-emekarị, ọ na-apụghị keere Windows dabeere Player dị ka Windows Media Player. N'ihi ya, m ga-atụ aro yout na-ekiri ya na Wondershare Player ruru ya sara mbara format nkwado. Na nke a achị achị nakwa prifekt Media Player, ị pụrụ ịnụ ụtọ enweghị nkebi playback na-enweghị ntụpọ arụmọrụ nke gị niile na fim, obere vidiyo na music. Ị adịghị mkpa ibiaghachi azụ na-apụta site na otu mgbasa ozi ọkpụkpọ ọzọ ọ bụla ogologo, na Wondershare Player ga-eme ka gị niile dijitalụ media ndụ na otu usoro ihe omume!